Ngwa kachasị mma maka igwefoto Nikon gị | Gam akporosis
N'ihe banyere foto ndị ọkachamara, Nikon bụ otu n'ime ụdị ihe dị mkpa nke ese foto SLR, ndị a ma ama ma jikwa gburugburu ụwa, yana ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị oke mkpa dịka Canon. Ngwaọrụ ndị a agbanweela n'ụzọ dị egwu n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ebe ọ bụ na ọbịbịa na mmụba nke smartphones, etinyewokwa ha na ha site na ngwa.
Igwefoto Nikon, dị ka Canon SLR ese foto na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na mpaghara ahụ, kwa enwere ike ijikwa site na iji ngwa kwesiri maka ama. Ọ bụrụ na ị maghị nke ọ bụla, ma ọ bụ na ịchọrọ ịnwale otu, taa anyị ewetara gị nhọrọ ụfọdụ n'ime ngwa gam akporo kacha mma maka igwefoto Nikon gị.
1 Igwefoto Ime Remote
2 Ndị ọrụ gọọmentị Nikon na-eji ngwa
3 Igwefoto Jikọọ na Njikwa
4 Ime Anwansi Nikon ViewFinder
Igwefoto Ime Remote
Anyị ga-amalite site na otu nke ngwa bara uru na nke kachasị mma, agbanyeghị na ọ dịkwa mma ịsị na ọ bụghị naanị ngwa maka ndị ọrụ igwefoto Nikon. "Igwefoto Ime Remote Control" bụ kpọmkwem ihe aha ya na-ekwu na ọ bụ, ngwa na nke i nwere ike iji gị gam akporo ama dị ka a ime akara nke gị igwefotoka. O dakọtara na ndị nrụpụta dịgasị iche iche, Nikon bụ otu n'ime ha. N'ezie, ị ghaghi iburu n'uche nke ahụ iji jiri ya mee ihe ekwentị gị ga-enwerịrị IR emitter (dika Xiaomi's Redmi Rịba ama 4, ịkpọ aha ya).
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ezigbo ngwa ịmalite yana ọ dịkwa n'efu (ọ bụ ezie na ọ nwere mgbasa ozi) ma ọ nweghị ihe mgbakwunye zuru ezu.
Njikwa Ime Igwefoto (DSLR)
Developer: Onye nzuzu
Ndị ọrụ gọọmentị Nikon na-eji ngwa
Otu ụzọ kachasị mma iji hụ na ndakọrịta ma ghara igbu oge na ndudue bụ ịhọrọ maka ngwa nke Nikon maka igwefoto ya, nke ọ nwerelarị akwụkwọ ndekọ dị mkpa na Storelọ Ahịa Play nwere ngwa ọrụ na ọrụ dị iche iche.
N'ime ha niile, o nwere ike ịbụ "Onye nlele ntuziaka" nke kachasị baa uru, ebe ọ bụ na ya ị nwere ike ibudata ma lelee akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ nke ese foto Nikon SLR ọ bụla.
Ọzọkwa ngwa "Nikkor & ACC" Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama, ọkachasị ndị mbido, ebe ọ bụ nnukwu enyemaka iji ghọta ngwaahịa na ngwa ndị ọzọ ị nwere ike iji igwefoto Nikon gị, dịka anya m, tripods na ọtụtụ ndị ọzọ.
Can nwere ike ịnweta ngwa niile Nikon mepụtara ma dị na Storelọ Ahịa Play maka gam akporo site na ebe a.
Igwefoto Jikọọ na Njikwa
"Njikọ Njikọ na Njikwa" bụ otu n'ime ngwa ndị na-enye nkwụsi ike na arụmọrụ ka mma maka igwefoto Nikon. Dabere na ihe nlereanya nke igwefoto gị, ị nwere ike jikọọ ya site na Wi-Fi ma ọ bụ USB. Site na nsụgharị efu ị ga-enwe ike lee ihe onyonyo na ijide, kamakwa were foto na vidiyo were smartphone gi dika ihe di n’ime, na-achịkwa ihe mkpuchi na ihe ndị ọzọ. Site na ugwo ugwo ị gha etinye nhọrọ dika ikiri ndu, nbudata buru ibu na ndi ozo.
Igwefoto Njikọ & Njikwa
Ime Anwansi Nikon ViewFinder
Na "Ime Anwansi Nikon ViewFinder" ị gaghị enwe ike ijikwa igwefoto Nikon gị nke ọma, mana hey, maka nke a, anyị egosila gị otu ngwa dị ezigbo mkpa. Kama nke ahụ, ọ bara ezigbo uru maka chọta foto nke foto gị. Ihe ọ na-eme bụ ịmegharị igwefoto nke igwefoto gị, mana n'adabereghị, ma na-enye gị ohere ịgbanwe akụkụ ahụ, gbanwee ihe ndị dị ka ikpughe. Can nwere ike ime ka ojiji nke anya m na ebumnobi, tinye ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị nkịtị presets na ọtụtụ ndị ọzọ.
"Magic Nikon ViewFinder" bụ ngwa n'efu na mgbasa ozi na ịzụrụ ihe ntanetị, yabụ ị nwere ike ịnwale ụfọdụ atụmatụ ya yana ma ọ dakọtara na igwefoto gị tupu ị kpebie ịzụta ya ma ọ bụ.
Ime Anwansi Nikon ViewFinder Free
Anyị kwụsịrị njedebe nke ụfọdụ ngwa kacha mma gam akporo maka igwefoto Nikon gị na "Helicon Remote", otu n'ime ihe ndị kasị dị oké ọnụ ngwa nke ya Atiya ọ bụ ezie na ọ bụ free download nke ga-ekwe ka ị na-elele Ọ bụrụ na ọ bara uru ịzụta ụdị zuru ezu nke ọnụahịa ya dị elu karịa euro 36 ma ọ bụ.
Ọ bụ ngwa maka iji ọkachamara Na ya ka ị nwere ike ịgbapụ agbapụ, debe oge ngosipụta ogologo oge, lee ndụ na ihuenyo zuru oke, ọ dakọtara na ọtụtụ igwefoto Nikon, mana ọ bụghị ihe niile, yabụ buru ụzọ hụ tupu ịzụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kachasị mma maka igwefoto Nikon gị
Foto kachasị mma nkekọrịta foto dị na Instagram